နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ် …အင်တာနက် သုံးတဲ့ သူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် အကောက်တစ်ခုတော့ ရှိကြစမြဲပါပဲ
အဲ့ဒိအကောက် က သူတို.ရဲ. အသိုက်အမြုံလေးတွေ လိုပါပဲ …ဒါပေမဲ့ …အဲ့ဒိ ဟာလေးတွေကို
ဟတ်ကာ လို.အမည် ခံထားတဲ့လူတွေ က လက်ဆော့ပြီး အပျင်းပြေ ဖျက်ဆီးတတ်ကြပါတယ်
…နေရာတော်တော် များများမှာ ကြားနေရပါတယ် …အဟတ်ခံကြရလို.တဲ့ စိတ်မကောင်းပါဘူး…ဒီလို အဟတ်ခံရတဲ့သူတွေ ဟာ….ကျွန်တော် ထင်တာကတော့ ..ဘယ်သူရယ် ဘယ်ဝါရယ်လို.သတ်သတ်မှတ်မှတ် အဟတ်ခံရတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး …သူများထောင်ထားတဲ့ ထောက်ချောက် ထဲကို ဘုမသိဘမသိ ရောက်သွားလို. အဟတ်ခံရတာ ..များကြပါတယ် … အဓိက ကတော့ spyware ပါ …သူလျှို ဆော့ဝဲလ်လေးတစ်ခုပေါ့
…အဲဒီ ဆော့ဝဲလ် ထောင်ထားတဲ့ စက်မှာ …
သူငယ်ချင်းအနေနဲ. အင်တာနက်သွားသုံးမိပြီ ဆိုရင် တော့ မတွေးဝံ့စ၇ာပါပဲ ..ဘာလို. လည်းဆိုတော့ သူက သူငယ်ချင်းလုပ်သမျှ အခြေအနေအားလုံးကို လိုက်မှတ်ထားလို.ပါ …မိမိ ဘယ်ပတ်စ်ဝေ့ါ ရိုက်လိုက်တယ် ..
ဘယ်သူနဲ.ချက်တင်လုပ်တယ် …ဘယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၀င်ကြည်.တယ် …စတာတွေပေါ့နော် …အကုန်လုံးပေါ့ ..
screen shot တောင်ပါလိုက်သေးတယ် …ဒီတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ.သူငယ်ချင်းတို.က်ု ဒီလို မျိုး အဖြစ်မခံရအောင်
စေတနာများစွာနဲ. ဒီ ပိုစ့်ကိုရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် … မန်ဘာတွေ အကုန်လုံးကို မြွေမြွေခြင်း
ခြေမြင်စေလို. တဲ့စေတနာနဲ.ပါ ….တကယ်လို. သူငယ်ချင်းအနေနဲ. ဒီပိုစ့်ိကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ ..အသိပညာလေးတစ်ခု
သူငယ်ချင်းအတွက် ..တိုးပွားလာမယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ကျေနပ်မိပါမှာပါ…..ဒီ ပိုစ့်ထဲက ဆော့ဝဲလ်ရတဲ့အခါ စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ် …ဒါပေမဲ့သူများကို ဒုက္ခရောက်အောင်တော့ မလုပ်ကြပါနဲ. နောက်ချင်ရင်နောက်ပါ …ပတ်စ်ဝေါ့တွေရလာတဲ့အခါမှာ …နောက်ချင်ရင် သုံးရက်လောက် ချိန်းထားလိုက်ပါ …ပြီးမှ သူ.ပတ်စ်ဝေါ့ အမှန်ကို ပြန်တည်.ပေးလိုက်ပါ …အကောက်ကို ဖျက်ပစ်တာတို. သူ.သူငယ်ချင်းတွေကို မိုက်မိုက်ရိုင်း၊ရိုင်ြးေုပာပစ်တာတွေ
မလုပ်ကြပါနဲ.အလွန်ပဲ အောက်တန်းကျလှပါတယ်….ဒီ ဆော့ဝဲလ်က သိတဲ့သူတွေ လည်းသိမှာပါ ….မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရည်ရွယ်တာပါ ….သိတဲ့သူငယ်ချင်းများ မိကျောင်းမင်း ရေခင်းပြတယ်လို.မထင်ကြပါနဲ. …ကဲ..
ဆော့ဝဲလ်ကို ..ဒီအောက်က လင့်လေးမှာ သွားပြီးဒေါင်းနိုင်ပါတယ် .Refog ဆိုတဲ့ Keylogger ဆော့ဝဲလ်လေးပါ.. ကျွန်တော်လည်းအရင်တုန်းက နာမည်ပဲ ကြားဖူးတာပါ .လူကိုမမြင်ဖူးပါဘူး အဲလေ ဆော့ဝဲလ်ကိုမတွေ.ဖူးပါဘူး.အခုမှ ရလို.ဝေမျှပေးတာပါ………..ဒေါင်းတဲ့ အခါမှာ …Anti Virus ကို ခနပိတ်ထားပါ..
နို.မို.ဆို Anti Virus က ဆော့ဝဲလ်ကို သတ်လို.ပါ …ဒေါင်းပြိးလို. ဆော့ဝဲလ်ကို အင်စတောလ် လုပ်ပြိးတဲ့အခါမှာ
ဆော့ဝဲလ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် …ပေါ်လာတဲ့အချိန်က စပြီးမှတ်တော့တာပါပဲ …သူငယ်ချင်း အနေနဲ.ဆော့ဝဲလ်ကို ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ …ဘယ်မှာမှ ရှာလို.တွေ.မှာမဟုတ်ပါဘူး ဘယ်ဖိုလ်ဒါထဲမှာမှ လည်းတွေ.မှာမဟုတ်ပါဘူး …
လုံးဝအပျောက်ရိုက်ထားတာပါ …ပြန်ဖော်ချင်ရင်တော့ Window + R နဲ. runကို ဖော်လိုက်ပါ …runပေါ်လာတဲ့အခါကျရင်
runbox ထဲမှာ …runrefog လို.ရိုက်လိုက်ပါ ..ဆော့ဝဲလ် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် …သူငယ်ချင်းအင်တာနက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာသွားထိုင်လို. စိတ်ထဲက မသင်္ကာဘူးဆိုရင် အဲ့ဒိလိုလုပ်ကြည်.လိုက်ပါ …ဆော့ဝဲလ်ရှိရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ..
ပေါ်လာလို.ရှိရင် …software ထဲမှာ uninstall ဆိုတာလေးကို click နှိပ် ပြီးပိတ်လိုက်လို.ရပါတယ် ..ဒီလိုမှ မလုတ်တတ်ဘူး ….keylogger ရှိရဲ.သားနဲ.သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နည်းတစ်နည်းရှိပါတယ် …ဘာလည်းဆိုတော့
ဥပမာ g talk signin ၀င်မယ် ဆိုရင် မိမိရဲ. password ကို အမှား9ခါ အမှန်တခါ ၇ိုက်ပြီး သုံးလို.ရပါတယ် …ဒီတော့
software ထောင်ထားတဲ့ သူက ပြန်ဖော်ကြည်.တဲ့အခါမှာ …ဘယ်password ကို အမှန်ယူရမှန်း မသိဘဲ ရူးသွားပါလိမ့်မယ် …ကဲသူငယ်ချင်အနေနဲ. ဒီဆော့ဝဲလ်ကို ဒေါင်းချင်ရင်တော့ ဒေါ်င်းပြီး စမ်းလိုက စမ်းနိုင်ပါတယ် …
ဒါပေမဲ့ သူများကို ဒုက္ခရောက်အောင်တော့ မလုပ်ကြပါနဲ. ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ် …မန်ဘာတွေ အားလုံးကို အဟတ်ခံရခြင်း ၊အထူးသဖြင့် keyloggerရန်မှ ..ကင်းဝေစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ.ပါ …
keylogger လိုချင်ရတော့ ဒေါင်းလိုက် ပါ။
Folder Option ဖော်မယ် ၊ ဖျောက်မယ်
Administrator Password မေ့သွားခဲ့သည်ရှိသော်.....